DAAWO SAWIRRO:-R/wasaare Kheyre “Ciidanka la diiwaan galiyay si joogto ayay u helaan Xuquuqdooda” |
DAAWO SAWIRRO:-R/wasaare Kheyre “Ciidanka la diiwaan galiyay si joogto ayay u helaan Xuquuqdooda”
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ka qeyb galay Barnaamijka Dardargelinta isdhexgalka Bulshada iyo Hay’adaha Amniga ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka ee la diiwaan galiyay ay si joogto ah u helaan xuquuqdooda oo dhameystiran halka wali qeybo kamid ah dalka ka socoto diiwaan galinta Ciidanka Xoogga dalka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kuwa aanan wali marin tirakoobka Ciidanka lasiin doono xuquuqdooda marka diiwaan galintu soo dhamaanto.
“Maalmahan waxaa la lahaa Ciidamo ayaan mushaar la siin, qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jiro, inta ay ka maqan tahayna waa in aan la diiwaan galin, fadlan geeya goobaha loogu tala galay, ku diiwaan galiya, Taliyeyaasha Ciidamada waxaan ka rabaa askari walba oo diiwaan gashan oo dadka u adeegaya Mushaarkiisa, raashinkiisa iyo daryeelkiisa inay aniga igu yimaadaan”.ayuu yiri Ra’iisul wasaare Kheyre.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in Dowlada ay ka go’an tahay in askari kasta uu xuquuqdiisa ku helo, isla markaana lala xisaabtami doono hadii ay jiraan kuwa aan Dalka iyo Dadka u shaqeyn Mushaarna qaata.
“Waxaa la rabaa kuligeen inaan aqbalno in Shilingii la inagu aaminay uu iyaga gaaro, waa inaan ku heshiinaa in ciidamada la diiwaan galiyo, xirooyinkooda ay joogaan, raashinkooda waa anagga bilownay in qeyb ka mid ah akoonkooda loogu soo shubo qofkii la diiwaan galiyay, waxaa rabaa Askari kasta oo la diiwaan galiyay oo shacabkiisa u adeegaya iyo kan aan shaqeyn inaan kala saarno”.
Wasaarada Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya iyo Taliska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa waxay ku howlan yihiin diiwaan-gelinta Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed si loo loo tayeeyo howlaha ciidanka loona hubiyo xuquuqda ciidanka.